Xogo Cusub Oo Laga Helay Shidaalka Somaliland Iyo Soomaaliya Iyo Baadhitaano Lagu Ogaaday Lix Goobood Oo Shidaalkani Ceegaago – somalilandtoday.com
Xogo Cusub Oo Laga Helay Shidaalka Somaliland Iyo Soomaaliya Iyo Baadhitaano Lagu Ogaaday Lix Goobood Oo Shidaalkani Ceegaago
(SLT-Hargeysa)-Khubaro Daraasaysa cilmiga Jiyoolajiga gaar ahaan khayraadka shidaalka ayaa waxa ay sheegeen in guud ahaan wixii hore la isugu odhan jiray Soomaaliya (Somaliland iyo Somalia) uu ku jiro shidaal badan oo noocyadiisa kala duwan ahi sida Batroolka iyo Gaasta dabiiciga ahba iyaga oo sheegay in shirkado badani wakhtigan xiisaynayaan in ay shidaal ka soo saaraan Somaliland iyo Soomaaliyaba iyaga daboolka ka qaaday xogo la helay oo muujinaya goobaha illaa hadda lagu wado in shidaal badani ku jiro.
Khubaradani waxa ya sheegeen in calaamado badan oo la helay ay muujinayaan in shidaal badani ku jiro dhinaca Soomaaliya marka lagu horreeyo badda Soomaaliya ee Indian Ocean. Astaamahaasi oo ay ka mid yihiin badda salkeeda oo uu ka soo siimoobo (seepage), uuna ka soo burqado isagoo dareere ah ama hawo ah ah.
Dayax-gacmeedyada baadha dhulka ayaa waxay ku arkeen badda Soomaaliya meelaha qaar inuu siimowgaasi ka jiro. Taasi waxay ka mid tahay daliilaha tusinaya baadhayaasha in badda salkeeda dhulka ahuu khayraad dabiici ah oo badani yaallo.
Dhinaca Somaliland baadhitaanadii sannadihii ugu dambeeyey laga sameeyey oo ay shirkado badani ka wadeen ayaa lagu ogaaday in oogada dhulka laga dheehan karo goobo badan oo gaas dabiici ahi ku jiro sida Gobolada Togdheer iyo Oodweyne. Halka dhinaca xeebta Gobollada Saaxil, Maroodi-jeex Awdal iyo Salal-ba ay ka jiraan shidaal noocyo kala duwan ahi.
Baadhistii dhinaca dalka Soomaaliya laga sameeyay 2014-2015 ee Soma Oil and Gas iyo tii ka dambaysay ee Spectrum Geo sammaysay (2015-2016) ayaa caddayn buuxda u noqday (Potential) botenshiyaalka (mugga loo maleeyo inuu ku jiro) shidaalka. Waxaa la arkay 3 aag (basin ama shidaal-fadhiisin) oo leh qaababkii iyo dhagaxdii shidaalka dhali lahaa, jidad kii uu ku siimoobi lahaa (migration pathways), dhagaxii kaydin lahaa iyo daboolladii isku dahaari lahaa si u fakanin. Saddexda aag waa Badda Galmudug, Badda Baraawe illaa Warsheikh iyo aagga Webi Jubba meeshuu badda kaga-darsamo.
Taas waxaa loo tarjumi karaa biyaha ku beegan maamul-goboleedyada Jubbaland, Koonfur Galbeed, Banaadir, Hirshabelle iyo Galmudug. Baadhista (Geo-physical) jiyo-fisikadeed intaas ayaa laga sammeeyay. Hore botenshiyaalka shidaalka ee badda Soomaaliya waxaa sheegay Hay’adda Mareekanka ee Sahanka Joolojiyeed (United States Geological Survey – USGS) markay qiyaaseen inta ku jirto shidaalka badda Bariga Afrika (min Mozambique , Tanzania, Kenya iyo Soomaaliya) inay ka badan tahay 28 bilyan oo fuusto shidaal dareere ah. Shirkadaha badda Soomaaliya sahmiyay sida ENI (1977 – Garacad-Mare-1), ExxonMobil (1982/83), Shell 1989/90), Total (2001), iyo Soma Oil and Gas (2014/15) dhammaan waxaa u soo if-baxay in shidaal ku jiro badda hoos teeda. Arag tidaas waxay ku salaysan tahay baaristii ballaarnayd oo ay sameeyeen.
Shirkadaha Somaliland iyo Soomaaliya heshiisyada la galay ama raba inay la galaan way badan yihiin. Shell-ExxonMobil ayaa ugu horraysay oo iyadu waxay la galeen Soomaaliya heshiis waagii Dowladdii Siyaad ee Diktatooriyadda ee Maxamed Siyaad Barre, November 1988 kaasi oo laga baadhay dhinaca Somaliland.
Shirkadaha heshiisyo la galay Maamulka Muqdisho ee sheegta dowladda federaalka ah marka laga tago waxaa jira shirkado kale oo heshiisyo gaar ah oo madax bannaan la galay dowladda Somaliland iyada oo Somaliland dalkaasi Soomaaliya gaar isaga taagay sannadkii 1991 oo uu xirriyadiisa dib ugala soo laabtay.
Si haddaba shirkadahan aad loogu dadaalo wax qabadooda, Soomaliland waxay u baahan tahay Sharicyo iyo Xeer-hoosaadyo is-waafaqsan, Qaab-heshiiseedka Wadaagga Soo-saarka oo isagana markiisa la jaan-qaadaya Sharciga Batroolka, Sharciga Cashuuraadka (oo aan weli jirin) iyo Sharciga Bii’ada ama deegaanka gaar ahaan ka khayraadka dabiiciga ah oo u baahan in la qoro.
Dhawaan waxa kale oo soo baxay xogo sheegaya in shirkaddii ugu waynayd shirkadaha Somaliland baadhitaanka ama sahaminta shidaal kula galay oo ah GENEL ENEGRY in ay doonayso in ay si rasmi ah ugu dhawaaqdo wixii ka soo baxay baadhitaankeedii sahaminta ahaa kadibna ay ku dhawaaqdo wakhtiga rasmiga ah ee ay shidaalka qodayso oo la sheegay in ay ku beegan tahay dabayaaqada 2019 ama horraanta sanadka 2020. waxaana laga dhur-sugayaa sida xaaladdaasi ku dambayso dadkuna aad u danaynayo.